durooma qalbii - NuuralHudaa
Last updated Feb 26, 2018 19
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e “Durummaan (tujjaarummaan) heddumina qabeenyaa qofaa miti; garuu durooma qalbiitu durooma (dhugaati).” Bukhaarii
Hadiisni wanni nuuf dhaamu, qabeenya qabaachuu qofaa miti kan dureeysa nama godhu. Dureeysi dhugaa kan qalbiin isaa dureeysaati. Dhuguma namni waan Rabbiin isaaf qoodeen quufe namni isarra dureeysaa hin jiru. Waan qabaniin quufuufi gammaduutu dureeysa qabaataa bololaa kan bololli gammachuu isa dhorge caala.
Abdullaah Ibnu Mas’ud akkana je’a “Irra caalaan wanni qalbitti nama darbamee yaqiina, irra caalaan duroominaa durooma qalbiiti, irra caalaan beekkumsaa kan fayyade….”
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam hadiisa biraa keeysatti “Waan Rabbi siif qoodeen quufi; dureeysa namaa taataa” je’an.
Waan Rabbiin nuuf qoodeen quufnaan kan nurra dureeysaa hin jiru. Kan harkaa qabu kanaatu qooda kiyya namni je’e waan harka namaa jirtu laalee saniif mataan hin wareeru. Saniif jecha gaddaan dhukkubsataa hin tahu. Inni quufaadha; kan Rabbiin kiyya naaf kenne na gaha je’ee waan qabuun gammada.
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e: “Namni Rabbiin kiyya Allaah tahuu jaaladhe, Islaamni diina kiyya tahuu jaaladhe, Muhammad Rasuula kiyya tahuu jaaladhe je’e jannanni isaaf sabattee jirti.” Sunan Abuu Dawuud
Maaltu hafe?! Namni Rabbiin isaa tokkicha haqaan gabbaramu tahe, Namni Rabbiin isaa tokkicha dachiifi samii uume tahe, Namni Rabbiin isaa tokkicha gabroottan isaatiif waan fedhu kennu tahe, Namni Rabbiin isaa Allaah tahuu jaalate, namni waan Rabbiin isaaf qoode jaalates irra dureeysa namaa tahee maaltu hafe?!
Wanni ilmi namaa waan isa harka hin jirre, tan akka isiin taate hin beeyneef gadduufi isii argamsiisuuf halaaka meeqaatama seenuuf, hundi isii sababaa qooda Rabbiitiin quufuu dhabuuti.
Namni qooda Rabbii isaatiin hin quufin qabeenyi isa quubsee isa duroomsu hin jiru. Qabeenyi inni argatee gammachuu dhugaa argatuunis hin jiru.
Gariin namaa qabeenyaatu ykn angootu durooma dhugaati je’ee yaada. Wanni inni dagate, irra hedduun namaa qabeenyaafi aangoos odoo qabuu bololli heddummeeyfachuu ija isaa jaamsee gammachuufi ziqii qalbii isa dhorga. Gammachuufi ziqiin qalbii tan dhugaa wanni argamtuun qooda Rabbiitti quufuu dha. Sun ammoo durooma Qalbiiti.
Gammachuun dhugaa qooda Rabbiin keenya nuuf kenneen quufuufi isa yaadachuun argamti.
Rabbiin durooma qalbii nuuf haa kennu.
Qophii: Abuu Muhammad (Jaafar Bayaan)
Nuuralhudaa	 May 10, 2022
Uumaan Rabbii keenyaa laakkawamee hin dhumu. Hardha uumama addaa tokko isin daaw’achiisna. Rabbiin keenya waan…
Biyya Muslimoota hedduu fi aadaawwan islaamummaa faallessanis hedduu…
May 19, 2022 sa;aa 6:27 pm Update tahe